टुटल पठाओलाई संरक्षण गरे लड्न तयार छौं : ट्याक्सी व्यावसयी
काठमाडौं । सरकारले टुटल पठाओ जस्ता एप्सलाई संरक्षण गरे ट्याक्सी व्यावसयीहरुले बिद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टुटल पठाओ जस्ता कानुनले बर्जित गरेका अराजक संस्थालाई एक पटक..
टुटल र पठाओलाई सरकारले दियो यात्रु बोके कारवाही गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीलाई सार्वजनिक प्रयोग गर्न नगर्न चेतावनी दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै कानूनको उल्लंघन गरी निजी प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारीले..
काठमाडौं । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने तयारी गरेको छ । एक हजार २०० अश्वक्षमताको र त्योभन्दा बढीका ट्याक्सीको दर्ता गर्न अध्ययन भइरहेको छ । यात्रुलाई सुविधायुक्त सवारीसाधन आवश्यक भएको भन्दै..
काठमाडौं । काठमाडौँको चन्द्रागिरि हिल्समा अवस्थित चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टलाई यस वर्षको उत्कृष्ट रिसोर्ट पुरस्कार ‘अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी एण्ड ट्राभल अवार्ड २०१९’ प्रदान गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा..
पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न स्थानीय तहलाई ४३ करोड बजेट, कुनले कति पाए ?
काठमाडौं । सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका लागि विभिन्न स्थानीय तहका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १४७ वटा स्थानीय तहका लागि ४३ करोड रुपैयाँ..
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जागिर खुल्यो
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न पदमा कर्मचारी मागेको छ । प्राधिकरणमा रिक्त रहेका ती पदहरुमा आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रक्रियामार्फत पदपूर्ति गर्नेगरी प्राधिकरणले दरखास्त आह्वान गरेको हो । इच्छुक उम्मेदवारले..
​दुग्ध विकास संस्थानमा ठुलो संख्यामा जागिर खुल्यो
काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले विभिन्न पदमा कर्मचारीको माग गरेको छ। संस्थानले विभिन्न आयोजनाहरुमा रिक्त रहेका अधिकृत स्तरका सहायक कर्मचारीको माग गरेको हो। उमेर सहायक स्तर पदको लागि दरखास्त वुझाउने..
अब निजामती कर्मचारी ६० वर्ष पुग्दासम्म अवकास नहुने
काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले नयाँ बन्ने निजामति सेवा ऐनमा नै उमेरहद ६० वर्ष राख्ने..
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौँ र सातौ तहका पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा श्रेणी–तहका आ। प्र..
एनएमबि बैंकले १८६ जना कर्मचारी माग्यो, अनुभवै नभएकालाई पनि अवसर
काठमाडौं। एनएमबि बैंकले एकै पटक १ सय ८६ जनाको लागि जागिर खुला गरेको छ। बैंकले व्यवस्थापन तहमा एकजना वरिष्ठ प्रवन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ। बाणिज्य बैंकमा न्युनतम..
सिटिजन्स बैंकले कर्मचारी माग्यो, कुन पदमा कति जना चाहियो ?
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले विभिन्न तहमा करिब ३ दर्जन कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै काठमाडौ उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि असिस्टेन म्यानेजरदेखि टेनी असिस्टेनसम्मका पदमा आवेदन..
नागरिक लगानीकोष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा जागिर खुल्यो, सहायकदेखि व्यवस्थापकसम्मले पाउने
काठमाडौं। नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले जागिरको लागि विज्ञापन खुला गरेका छन्। नागरिक लगानीकोषले अधिकृत र सहायक स्तरका पदमा १२ जना कर्मचारी माग गरेको छ। अधिकृत स्तरको छैठौ तहमा..
उपल्लो मुस्ताङ जाने पर्यटकले ५ सय डलर तिर्नुपर्ने
मुस्ताङ। सडक र महँगो प्रवेश शुल्क उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन विकासको चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी भइरहेका बेला केही वर्षयता उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटक बढ्न..
राष्ट्र बैंकमा ठुलो संख्यामा माग्यो कर्मचारी, प्लस टु पासलाई पनि जागिर खाने अवसर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भएको छ । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न पदमा गरि एकैपटक कूल ६७ जना जनशक्ति माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यबस्थापन विभागले..
कतारले तोक्यो कामदारको तलब, आउँदो जनवरीदेखि लागु हुने
काठमाडौं । खाडी मुलुक कतारले आफ्नो देशमा काम गर्न आउने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको दर तोकेको छ । साथै काफला पद्धती हटाइएको निर्णय पनि गरेको छ । सबै देशका कामदारलाई समानरुपमा लागू..
सरकारले एकै पटक ४३ हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने
काठमाडौं । के तपाई बेरोजगार हुनुुहुन्छ ? शिक्षित पनि हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि अल्पकालीन रोजगारी प्राप्त हुने भएको छ । सरकारले हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्दै आएको छ । विगतमा..
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ११५ जना कर्मचारी चाहिएको माग गर्दै आवेदन खुलाएको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिरको लागि २५ जना म्यानेजमेन्ट ट्रेनी र ९० जना जुनियर एसिटेन्ट पदको..
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ६७८ उपसचिव र सहसचिव पदको विज्ञापन आह्वान गरेको छ । आयोगले ४५९ उपसचिव र २१९ सहसचिव पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको हो । आयोगले विभिन्न सेवा समूह तथा..
गोलाप्रथा जित्ने मात्रै भाषा परीक्षा दिई जापान जान पाउने
काठमाडौं । स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्लु) अन्तर्गत नर्सिङ केयर गिभरमा जापान जाने नेपाली कामदारले भाषा परीक्षामा सहभागी हुन गोला प्रथा जित्नुपर्ने भएको छ। नेपालीहरूले धेरै संख्यामा भाषा परीक्षामा सहभागी हुने चासो..
लोकसेवाले ९ हजार १६२ कर्मचारीको विज्ञापन खोल्दै
Posted on Sep 28 2019
ललितपुर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपालका विशिष्ट पदका व्यक्ति र निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न काभ्रेको नवोबुद्ध नगरपालिकामा संघीयता अध्ययन केन्द्र निर्माण गरिने बताएका छन् । शनिवार..
घटस्थापनाको दिन सार्वजनिक विदाको माग
काठमाडौं । क्षत्री समाज नेपालले नेपालीहरुको महान पर्व बडादशैँको पहिलो दिन घटस्थापनामा सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको छ । ‘राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति क्षत्री एकता आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल..
आज विद्युतीय बसमा सवार गर्दा निःशुल्क, कुन कनु रुटमा पाइन्छ सुविधा ?
काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा सुन्दर यातायातले काठमाडौंमा निःशुल्क बस सेवा दिएको छ । कम्पनीले शुक्रबार काठमाडौंको रिंगरोडको रुटमा चलिहरेका आफ्ना विद्युतीय बसमा निःशुल्क सेवा दिएको कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले..
७० सहसचिव र १५६ उपसचिवको विज्ञापन असोज अन्तिममा
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले प्रशासन सेवातर्फ ७० सहसचिव र १ सय ५६ उपसचिवको पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । आयोगले असोजको अन्तिम बुधबार प्रशासनतर्फका सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन आह्वान गर्ने..
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले बुधवार ललितपुरमा आयोजना गरेको..
अब शान्ति सेनामा जाने सिपाहीले मासिक १ लाख २७ हजार रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीको भत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ। सैनिकहरूले पाउँदै गरेको भत्तामा प्रतिमहिना ८५ अमेरिकी डलर (साढे ९ हजार बढी रुपैयाँ) वृद्धि गर्ने निर्णय..
एकै पटक ८ हेलिकप्टरले गरे आकस्मिक अवतरण
काठमाडौं । खराब मौसमका कारण एकैपटक आधा दर्जन बढी हेलिकप्टरले एकै क्षेत्रमा आकस्मिक अवतरण गरेका छन्। काठमाडौं विमानस्थलमा आउँदै गरेका अधिकांस हेलिकप्टर काभ्रे, सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अवतरण गरेका हुन्। सिम्रिक एयरका..
काठमाडौं। नेपाल बैंक लिमिटेडले ५ सय ६६ जना कर्मचारी माग गरेको छ। सहायक प्रबन्धकदेखि कनिष्ठ सहायकसम्म गरेर बैंकले कर्मचारी माग गरेको हो। इच्छुकले असोज १९ गतेमित्र अनलाइमार्फत आवेदन दिन सक्ने..
काठमाडौं । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले कर्मचारी मागेको छ । विभिन्न पदका कर्मचारीहरुका लागि लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको लिखित परिक्षाका लागि लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको हो । शुक्रवारको गोरखापत्रमा..
मलेसियामा रोजगारी खुल्यो, अड्केका सबै विषयमा सहमति जुट्यो
काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच भएको पछिल्लो श्रम समझदारीमा अड्केका सबै विषयमा सहमति जुटेको छ । मलेसियाको पुत्रजयामा २४ भदौदेखि जारी नेपाल र मलेसिया सरकारका अधिकारीहरुबीच भएको वार्तापछि श्रम समझदारी कार्यान्वयन..
नबिल बैंक सहित ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी मागे, प्लस टु पासले पनि आवेदन गर्न सक्ने
काठमाडौ। नबिल बैंकले ६० जना कर्मचारी माग गरेको छ। बैंकले म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा १० र ट्रेनीमा ५० जना कर्मचारी माग गरेको छ। म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका लागि ब्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ। एसिस्टेन्टका लागि स्नातक भए..
Results 878: You are at page2of 30